Coral Reef: နှလုံးသား အာဟာရမှသည် နာမည်တစ်လုံး ရမလာခင်ထိ
Anonymous said on May 7, 2011 at 10:01 PM
Anonymous said on May 8, 2011 at 8:31 AM
A thoughtful ans applicable reader, proud you to obtain eight diplomas andadegree at age 23. Wishing you apply your study in suitable post.
BTW, in the West who gain many certificates is called "Tin Collector" by disagreed persons.
ဇွန်မိုးစက် said on May 8, 2011 at 9:15 AM
လာဖတ်ပေးတဲ့ အနောနီးမတ်စ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
To Anonymous... The message of this post is how reading andagood book can change your concepts and assist to achieve in our lives somehow. There is no intention rather that. I'm sorry if you get it wrong by other way.
Anyway, Thanks for giving your time to read and dropacomment.
Shinlay said on May 8, 2011 at 11:46 AM
ကိုယ်ဖတ်လို့ ၊ကြားလို့ ၊မြင်လို့ ရလာတဲ့ အသိတရား ကို အကျိုးရှိအောင်ပြန်သုံးတတ်တာ အလွန် ကောင်းပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပဲ ကျမတို့ ရဲ့အရည်အသွေး ကိုမြှင့်ပေးရမှာပါ။
Phyo Maw said on May 10, 2011 at 9:05 AM
တက်ကျမ်းတော့ ကျနော်လည်း ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
၉ တန်းတုန်းက ဘေဘီလုံမှာ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်
၁၀ တန်းရောက်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သေချာပြီလား
၁၀ တန်းအောင်ပြီး နောက်ပိုင်း ဘာကြောင့်ခုထိမချမ်းသာသေးတာလဲ၊ ဂျီးနိယပ်၊ နှလုံးသားအာဟာရ ၁ ၂ ၃၊ စသဖြင့် တခြား ဒီထဲမှာမပါသေးတာတွေလဲ ဖတ်ဖြစ်တယ်။
လူသုံးကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်သူများ ဖတ်အပြီးတော့ ဆရာဖေမြင့်ကို တက်ကျမ်းအပြင် ဝတ္ထုတိုတွေလည်း အရေးကောင်းတာပဲ မြင်မိတယ်။ ကိုယ့် စိတ်နေစိတ်ထား ပြောင်းလဲတဲ့အချက်တွေထဲမှာ ဒီစာအုပ်တွေကြောင့်လည်း ပါခဲ့တယ် ပြောရမယ်
Rita said on May 10, 2011 at 11:27 AM
ဝတ္ထုတိုဆိုရင် ပထမဆုံးသတိရမိတဲ့ အကြိုက်ဆုံး အမျိုးသား စားရေးဆရာ ၃ ယောက်ထဲမှာ ဆရာဖေမြင့် အပါအဝင်ပေါ့။ သူပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ဂ်ျကို နားလည်တာ မလည်တာ၊ သဘောတူတာ မတူတာထက် အခင်းအကျင်း အပို့အယူ စကားလုံးတွေကို လက်ဖျားမခါဘဲ မနေနိုင်အောင် ဖြစ်ရတယ်။ ဆရာ့ရဲ့ ပင်ကိုရေးတွေကို ပိုကြိုက်မိတယ်။